Usoro na ọnọdụ nzụta izugbe: B2B - Law & More B.V.
blog » Usoro na ọnọdụ nzụta izugbe: B2B
Usoro na ọnọdụ nzụta izugbe: B2B
Dịka onye ọchụnta ego, ị na -abanye na nkwekọrịta mgbe niile. Ọzọkwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Usoro na ọnọdụ izugbe na -abụkarị akụkụ nke nkwekọrịta ahụ. Usoro na ọnọdụ izugbe na -ahazi (iwu) isiokwu dị mkpa na nkwekọrịta ọ bụla, dị ka usoro ịkwụ ụgwọ na ụgwọ. Ọ bụrụ, dị ka onye ọchụnta ego, ịzụrụ ngwongwo na/ma ọ bụ ọrụ, ị nwekwara ike nwee ọnọdụ nke ọnọdụ ịzụta izugbe. Ọ bụrụ na ịnweghị ihe ndị a, ị nwere ike ịtụle ịdepụta ha. Onye ọka iwu si Law & More ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka na nke a. Blọọgụ a ga -atụle akụkụ kachasị mkpa nke usoro izugbe na ọnọdụ ịzụrụ ma gosipụta ụfọdụ ọnọdụ maka ngalaba akọwapụtara. Na blọgụ anyị 'Usoro na ọnọdụ izugbe: ihe ị kwesịrị ịma gbasara ha' ị nwere ike gụọ ozi gbasara mkpụrụedemede gbasara usoro na ọnọdụ yana ozi masịrị ndị na -azụ ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ na -elekwasị anya na ndị na -azụ ahịa.
Kedu ihe bụ usoro na ọnọdụ izugbe?
Usoro na ọnọdụ izugbe na -enwekarị ụkpụrụ ọkọlọtọ enwere ike iji ọzọ maka nkwekọrịta ọ bụla. N'ime nkwekọrịta n'onwe ya ndị otu na -ekwenye n'ihe ha na -atụ anya n'aka ibe ha: nkwekọrịta bụ isi. Nkwekọrịta ọ bụla dị iche. Ọnọdụ izugbe tọgbọrọ ihe izizi. Ezubere usoro na ọnọdụ izugbe ka a ga -eji ugboro ugboro. Ị na -eji ha ma ọ bụrụ na ị na -abanye n'otu ụdị nkwekọrịta ma ọ bụ nwee ike ime ya. Usoro na ọnọdụ izugbe na -eme ka ọ dịrị gị mfe ịbanye na nkwekọrịta ọhụrụ, n'ihi na ekwesighi ịtọba ọtụtụ isiokwu (ọkọlọtọ) oge ọ bụla. Ọnọdụ ịzụrụ ihe bụ ọnọdụ metụtara ịzụta ngwaahịa na ọrụ. Nke a bụ echiche sara mbara. Ya mere enwere ike ịchọta ọnọdụ ịzụrụ ihe na ngalaba niile dị ka ụlọ ọrụ na -ewu ụlọ, ngalaba nlekọta ahụike na ngalaba ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na -arụsi ọrụ ike n'ahịa azụmaahịa, ịzụrụ ihe ga -abụrịrị ụbọchị. Dabere n'ụdị azụmaahịa a na -aga n'ihu, ekwesịrị ịhazi usoro na ọnọdụ kwesịrị ekwesị.
Mgbe ị na -eji usoro na ọnọdụ izugbe, akụkụ abụọ dị oke mkpa: 1) kedu mgbe enwere ike ịkpọbata okwu na ọnọdụ, yana 2) kedu ihe nwere ike na enweghị ike ịhazi n'usoro na ọnọdụ niile?
Na -akpọku usoro na ọnọdụ nke gị
N'ọnọdụ esemokwu gị na onye na -ebubata ngwaahịa, ị nwere ike chọọ ịdabere na ọnọdụ ịzụta izugbe gị. Ma ị nwere ike ịdabere na ha n'ezie dabere n'ọtụtụ akụkụ. Nke mbụ, ekwesịrị ikwupụta usoro na ọnọdụ niile. Kedu ka ị ga -esi ekwupụta na ha dabara? Site na ikwu na arịrịọ maka nhota, ịtụ ma ọ bụ ịtụ ahịa ma ọ bụ na nkwekọrịta ị kwupụtara ọnọdụ ịzụta izugbe gị na nkwekọrịta ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike tinye ahịrịokwu a: 'Ọnọdụ izugbe nke [aha ụlọ ọrụ] metụtara na nkwekọrịta anyị niile'. Ọ bụrụ na ị na -eme ụdị ịzụrụ ihe dị iche iche, dịka ọmụmaatụ ịzụta ngwongwo na nkwekọrịta ọrụ, yana ị na -arụ ọrụ na ọnọdụ izugbe dị iche iche, ị ga -egosikwa n'ụzọ doro anya ụdị ọnọdụ ị kwupụtara na ọ ga -adị.
Nke abuo, otu azụmaahịa gị ga -anabatarịrị ọnọdụ ịzụ ahịa gị. Ọnọdụ kacha mma bụ na edere nke a na ederede, mana nke a adịghị mkpa maka ọnọdụ a ga -etinye. Enwere ike ịnakwere ọnọdụ ndị a nke ọma, dịka ọmụmaatụ, n'ihi na onye na -ebubata ngwaahịa emeghị mkpesa megide nkwupụta nke itinye ọnọdụ ọnọdụ izugbe gị wee soro gị banye nkwekọrịta.
N'ikpeazụ, onye ọrụ nke ọnọdụ ịzụrụ ihe n'ozuzu, ya bụ gị dị ka onye zụrụ ahịa, nwere ọrụ ozi (Nkebi 6: 233 n'okpuru b nke Usoro Obodo Dutch). A ga -emezu ọrụ a ma ọ bụrụ na enyefela ọnọdụ ịzụta izugbe n'aka onye na -ebubata ngwaahịa tupu ma ọ bụ na njedebe nke nkwekọrịta ahụ. Ọ bụrụ na -enyefe ọnọdụ izugbe izugbe tupu ma ọ bụ n'oge mmechi nkwekọrịta bụ ọ gaghị ekwe omume, ọrụ nke inye ozi nwere ike mezuo n'ụzọ ọzọ. N'ọnọdụ ahụ ọ ga -ezuru ikwupụta na ọnọdụ ndị ahụ dị maka inyocha na ọfịs onye ọrụ ma ọ bụ na Chamber of Commerce nke o gosipụtara ma ọ bụ na etinyela ha akwụkwọ ndekọ ụlọ ikpe, na a ga -eziga ha mgbe ha rịọrọ. A ghaghị ikwupụta okwu a tupu mmechi nkwekọrịta ahụ. Eziokwu ahụ bụ na nnyefe agaghị ekwe omume n'ụzọ ezi uche dị na ya nwere ike bụrụ naanị n'ọnọdụ ndị pụrụ iche.
Nnyefe nwekwara ike ime na elektrọnik. N'okwu a, otu ihe achọrọ dị maka inyefe anụ ahụ. N'ọnọdụ ahụ, a ga -enwerịrị ọnọdụ ịzụrụ ihe tupu ma ọ bụ n'oge mmechi nkwekọrịta ahụ, n'ụzọ nke onye na -ebubata ngwaahịa nwere ike chekwaa ha ma enwere ike ịnweta ha maka ntụnye n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na nke a ọ gaghị ekwe omume. Biko rụba ama.
Ọ bụrụ na ọrụ nke ịnye ozi emezughị, ị nwere ike ị gaghị enwe ike ịkpọba nkebiokwu na usoro na ọnọdụ niile. Nkebiokwu ahụ bụ ihe efu. Nnukwu onye otu enweghị ike ịkpọ oku n'ihi mmebi nke ọrụ ịnye ozi. Otú ọ dị, ndị ọzọ nwere ike ịdabere na ezi uche na ịkwụwa aka ọtọ. Nke a pụtara na ndị otu nke ọzọ nwere ike na -arụrịta ụka na ihe kpatara na enweghị ike ịnye ndokwa na ọnọdụ ịzụta gị n'ozuzu ya n'ihi ụkpụrụ ahụ e kwuru n'elu.
Agha nke ụdị
Ọ bụrụ na ị na -ekwupụta ọnọdụ ịzụta izugbe gị niile, ọ nwere ike ime na onye na -ebubata ngwaahịa jụrụ ojiji nke ọnọdụ gị wee kwupụta ọnọdụ nnyefe izugbe nke ya dị. A na -akpọ ọnọdụ a 'ọgụ nke ụdị' n'asụsụ iwu. Na Netherlands, iwu bụ isi bụ na ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha na mbụ metụtara. Yabụ, ị kwesịrị ịgba mbọ hụ na ị kwupụtara ọnọdụ ịzụta izugbe gị niile wee nyefee ha n'oge enwere ike. Enwere ike ikwuputa ọnọdụ ndị ahụ ka ha malite n'oge arịrịọ maka onyinye. Ọ bụrụ na onye na -ebubata ngwaahịa ajụghị ọnọdụ gị n'ụzọ doro anya n'oge a na -enye ya, ọnọdụ ịzụta izugbe gị niile ga -adị. Ọ bụrụ na onye na -ebubata ngwaahịa gụnyere usoro na ọnọdụ nke ya na nkwupụta (onyinye) wee jụ nke gị nke ọma wee nabata onyinye ahụ, ị ​​ga -atụgharịrịrị ọzọ na ọnọdụ ịzụrụ gị wee jụ nke onye na -ebubata ya. Ọ bụrụ na ị jụghị ha n'ụzọ doro anya, a ka ga -ehiwe nkwekọrịta nke usoro na ọnọdụ ọrịre nke onye na -ebubata ya na -emetụta! Ya mere ọ dị mkpa na ị ga -egosi onye na -ebubata ngwaahịa na naanị ị ga -achọ ikwenye ma ọ bụrụ na ọnọdụ ịzụta izugbe gị metụtara. Iji belata ohere nke mkparịta ụka, ọ kacha mma ịgụnye eziokwu na ọnọdụ ịzụta izugbe na -adị na nkwekọrịta n'onwe ya.
Nkwekọrịta mba ụwa
Ihe dị n'elu nwere ike ọ gaghị emetụta ma ọ bụrụ na enwere nkwekọrịta ahịa mba ofesi. N'ọnọdụ ahụ, ụlọ ikpe nwere ike ịlele Nkwekọrịta ahịa Vienna. Na mgbakọ ahụ, 'ịkụpụ iwu' na -emetụta. Isi iwu bụ na ekwubiri nkwekọrịta ahụ yana ndokwa dị na usoro na ọnọdụ ekwenyebere n'ụdị akụkụ nke nkwekọrịta ahụ. Nhazi nke ọnọdụ izugbe abụọ nke esemokwu anaghị abụ akụkụ nke nkwekọrịta ahụ. Ya mere ndị otu a ga -eme nhazi maka ndokwa ndị na -emegiderịta onwe ha.
Nnwere onwe nke nkwekọrịta na mgbochi
A na -achịkwa iwu nkwekọrịta site n'ụkpụrụ nnwere onwe nke nkwekọrịta. Nke a pụtara na ọbụghị na ị nweere onwe gị ikpebi onye na -ebubata ngwaahịa ị ga -eso na nkwekọrịta, kamakwa ihe ị kwenyere na ya. Agbanyeghị, ọ bụghị ihe niile nwere ike idobe n'ọnọdụ enweghị mmachi. Iwu ahụ kwukwara na na mgbe ọnọdụ izugbe nwere ike 'ghara ịdị irè'. N'ụzọ dị otu a, a na -enye ndị na -azụ ihe nchebe ọzọ. Mgbe ụfọdụ ndị ọchụnta ego nwekwara ike ịkpọku iwu nchedo. A na -akpọ nke a mmegharị mmegharị. Ndị a na -abụkarị obere ogbo. Dịka ọmụmaatụ, ndị a bụ mmadụ nkịtị na -arụ ọrụ ma ọ bụ azụmaahịa, dị ka onye na -eme achịcha. Ọ dabere na ọnọdụ a kapịrị ọnụ ma otu dị otu a nwere ike ịdabere na iwu nchekwa. Dị ka ndị na -azụ ahịa, ị gaghị eburu nke a n'uche na ọnọdụ izugbe gị, n'ihi na ndị ọzọ na -abụkarị ndị na -enweghị ike ịrịọ iwu nchekwa ndị ahịa. Ndị ọzọ na -abụkarị oriri na -ere/nyefee ma ọ bụ na -enye ọrụ oge niile. Ọ bụrụ na ị na -eme azụmahịa na 'otu adịghị ike' enwere nkwekọrịta dị iche. Ọ bụrụ na ị họrọ iji ọnọdụ ịzụta ọkọlọtọ gị, ị na -agba ọsọ n'ihe egwu na ị nweghị ike ịdabere na otu ahịrịokwu na ọnọdụ izugbe n'ihi na, dịka ọmụmaatụ, onye otu gị mebiri ya.
Iwu nwekwara mmachi na nnwere onwe nke nkwekọrịta nke metụtara onye ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, nkwekọrịta n'etiti ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị emegide iwu ma ọ bụ usoro ọha, ma ọ bụghị na ha enweghị isi. Nke a metụtara ma nhazi dị na nkwekọrịta n'onwe ya yana ndokwa n'ozuzu usoro na ọnọdụ. Na mgbakwunye, enwere ike ịkagbu okwu ma ọ bụrụ na anabataghị ya dịka ụkpụrụ nke ezi uche na ịdị mma si dị. N'ihi nnwere onwe nke nkwekọrịta ahụ e kwuru na mbụ na iwu nke a ga -emerịrị nkwekọrịta, a ga -eji njide were tinye ụkpụrụ ahụ e kwuru n'elu. Ọ bụrụ na -anabataghị itinye ngwa nke okwu a na -ekwu, enwere ike ịkagbu ya. Ọnọdụ niile nke ikpe a kapịrị ọnụ na -ekere òkè na ntule.
Kedu isiokwu a na -ekpuchi na usoro na ọnọdụ niile?
N'okwu na ọnọdụ izugbe ị nwere ike ịtụ anya ọnọdụ ọ bụla ị ga -ahụ onwe gị na ya. Ọ bụrụ na ndokwa anaghị adị na otu okwu, ndị otu nwere ike kwenye na ndokwa a - yana ndokwa ọ bụla ọzọ - ga -ewepụ. Ọ nwekwara ike ịme nhazi dị iche iche ma ọ bụ karịa na nkwekọrịta n'onwe ya karịa na usoro na ọnọdụ niile. N'okpuru bụ ọtụtụ isiokwu enwere ike ịhazi na ọnọdụ ịzụrụ gị.
Nke mbụ, ọ bara uru ịgụnye ndepụta nkọwa na ọnọdụ ịzụta izugbe. Ndepụta a na -akọwa usoro dị mkpa na -emegharị na ọnọdụ ndị a.
Ibu bụ isiokwu chọrọ ka ahazie ya nke ọma. Na ụkpụrụ, ịchọrọ ka otu atụmatụ ibu ọrụ tinye n'ọrụ na nkwekọrịta ọ bụla. Ịchọrọ wezuga ụgwọ nke gị ka o kwere mee. Ya mere, nke a bụ isiokwu a ga -ahazi tupu oge na ọnọdụ ịzụta izugbe.
Ndokwa gbasara akụ ọgụgụ isi kwesịkwara ịgụnye na usoro na ọnọdụ ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị na -enyekarị ndị na -atụpụta ụkpụrụ iwu ka ha hazie eserese ụlọ na/ma ọ bụ ndị ọrụ ngo ka ha wepụta ụfọdụ ọrụ, ị ga -achọ ka nsonaazụ ikpeazụ bụrụ nke gị. Na ụkpụrụ, onye na -ese ụkpụrụ ụlọ, dị ka onye na -eme ya, nwere ikike nwebisiinka maka eserese. N'ọnọdụ izugbe, dịka ọmụmaatụ, enwere ike ikwu na onye na -ese ụkpụrụ ụlọ na -enyefe ikike ma ọ bụ nye ikike ka emee mgbanwe.
Mgbe gị na ndị ọzọ na -akparịta ụka ma ọ bụ mgbe ị na -azụ ihe n'ezie, a na -ekerịta ozi dị nro (azụmahịa). Ya mere, ọ dị mkpa ịgụnye ndokwa n'ozuzu na ọnọdụ nke na -ahụ na onye otu gị enweghị ike iji ozi nzuzo (dị ka nke ahụ).
Ọ bụrụ na ịzụrụ ngwaahịa ma ọ bụ nye iwu oriri iji nye ọrụ, ị na -achọkarị ka ndị ọzọ ahụ nwee nkwa ụfọdụ ntozu ma ọ bụ nsonaazụ.
Iwu dabara adaba & ọkaikpe ruru eru
Ọ bụrụ na ndị otu nkwekọrịta gị nọ na Netherlands na nnyefe ngwongwo na ọrụ na -ewere ọnọdụ na Netherlands, ndokwa maka iwu dị na nkwekọrịta ahụ nwere ike iyi ihe na -adịchaghị mkpa. Agbanyeghị, iji gbochie ọnọdụ ndị a na -atụghị anya ya, ọ bụ ezi echiche itinye mgbe niile na usoro na ọnọdụ nke iwu ị kwupụtara na ọ dị. Na mgbakwunye, ị nwere ike igosi na usoro na ọnọdụ nke ụlọ ikpe ga -edobe esemokwu ọ bụla.
Ndepụta dị n'elu abụghị nke zuru oke. Enwere n'ezie ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ enwere ike ịhazi n'usoro na ọnọdụ niile. Nke a dabere na ụdị ụlọ ọrụ yana mpaghara ọ na -arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga -abanye n'ọtụtụ ihe atụ nke isiokwu na -atọ ụtọ maka ọnọdụ ịzụrụ ihe n'ozuzu ma ọ bụrụ nkwekọrịta maka ọrụ.
Ọ bụrụ na gị dị ka onye isi ma ọ bụ onye ọrụ nkwekọrịta na -etinye onye ọrụ ngo (sub) ka ọ rụọ ọrụ ihe onwunwe, mgbe ahụ ị ga -adaba n'okpuru iwu nke ibu. Nke a pụtara na ị ga -akwụ ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ ụtụ ịkwụ ụgwọ nke onye ọrụ nkwekọrịta (sub) gị. A kọwara ụtụ ịkwụ ụgwọ na onyinye nchekwa mmadụ dị ka ụtụ ịkwụ ụgwọ yana onyinye nchekwa mmadụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ ngo gị ma ọ bụ onye na -ere ahịa anaghị emezu ọrụ ịkwụ ụgwọ, ụtụ isi na kọstọm nwere ike ijide gị. Iji zere ibu ọrụ dị ka o kwere mee na iji belata ihe egwu, ị kwesịrị ịme nkwekọrịta ụfọdụ na onye nkwekọrịta (sub) gị. Enwere ike ịtọ ihe ndị a n'ozuzu usoro na ọnọdụ.
Ọrụ ịdọ aka na ntị
Dịka ọmụmaatụ, dị ka onye isi, ị nwere ike ikwenye na onye ọrụ nkwekọrịta gị na tupu ọ malite ọrụ, ọ ga -enyocha ọnọdụ dị na saịtị wee kọọrọ gị ma ọ bụrụ na enwere mperi na ọrụ ahụ. Ekwekọrịtara nke a iji gbochie onye ọrụ ngo ahụ ịrụ ọrụ ahụ n'echeghị anya wee mee ka onye ọrụ nkwekọrịta na -eche echiche. N'ụzọ dị otu a, enwere ike igbochi mmebi ọ bụla.
Maka ebumnuche nchekwa, ịchọrọ ịmanye ihe achọrọ na njiri mara nke onye nkwekọrịta na ndị ọrụ nkwekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọ asambodo VCA. Nke a bụ isi ihe aga-eme na usoro na ọnọdụ izugbe.
Dịka onye ọchụnta ego ị nwere ike chọọ ikwupụta usoro na ọnọdụ nchịkwa nke edobere maka mmezu nke ọrụ na nrụnye nka na ụzụ 2012 dabara na mmekọrịta gị na ndị ọzọ. N'ọnọdụ ahụ ọ dịkwa mkpa ikwuputa na ọ dabara na ọnọdụ ịzụta izugbe. Tụkwasị na nke a, a ga -egosikwa ihe ọ bụla wepụrụ na UAV 2012.
The Law & More ndị ọka iwu na -enyere ma ndị na -azụ ahịa ma ndị na -ebubata ihe aka. Ị chọrọ ịma kpọmkwem ihe usoro na ọnọdụ n'ozuzu ha bụ? Ndị ọka iwu si Law & More nwere ike nye gị ndụmọdụ na nke a. Ha nwekwara ike hapụtara gị usoro na ọnọdụ izugbe maka gị ma ọ bụ tulee ndị dị adị.
Previous Post Ịmata na ime mkpebi ikpe mba ọzọ na Netherlands
Next Post Iwu Nkwụnye ego na usoro ya